Mihirat Kadiir: 'Yeroo hunda qophii akkasiirratti nan utaala kan fiigicha Irreechaa kun garuu adda' - BBC News Afaan Oromoo
Fiigichi Guddichi Irreechaa Fulbaana 22, 2019 Finfinneetti gaggeeffamee dhimmoota ittiin yaadatamu keessaa tokko agarsiisa suura Tekuwaandoo shamarree tokkoo.
Shamarreen kun ispoortii adda addaa, keessumaa ammoo Tekuwaandootiin seenaa tuullaa qabdi. Akka BBC Afaan Oromoo odeeffatetti sadarkaa idil-addunyaarratti gurra horatteetti. Yeroo ammaas Yunvarsiitii Finfinnee keessatti oggummaa barsiisummaatiin hojjataa jirti. Isheenis garee Ispoortii Biyyaalessaa Itoophiaas leenjisaa jirti.
Turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiste kunoo itti dhiyaadhaa.
BBC: Mee maqaa keeerraa ka'ii hodoftoota BBC Afaan Oromootiin wal bari.
Mihirat: Maqaan kiyya Mihirat Kadiir jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Magaalaa Arsii Nagalleetti. Yunvarsiitii Finfinnee keesatti gargaartuu Lekchereraa ta'een hojjechaa jira. Dabalataanis Tekuwaandoon hojjedha. Gama Tekuwaandootiinis garee biyyaalessaatiif Leenjistuu gargartuu ta'uun tajaajilaan jira.
BBC: Maarshaal Aartii [Tekuwaandoo] akkamiifi maaliif eegalte?
Mihirat: Yeroo ijoollummaa koo ispoortii hojjechuun baayyisa ture. Kubbaas nan taphadha. Jiminaastikiis xiqqoo yalaan ture.
Mucaan ani akka obboleessa kootti ilaalu tokkotu yeroo manni Ispoortii banamutti isheen ispoortii hojjechuu qabdi jedhee maatii koo amansiise. Yeroo duraa abbaan koo didee ture garuu, haadha koo amansiifnaan qarshii naaf kennitee mana ispoortii Abdii Booruu jedhutti shaakkallii eegale.
Leenjisaan kiyyas Abdiisaa Adam jedhama.
BBC: Maarshaal Artii [Tekuwaandoo] kanaan hanga sadarkaa kamii deemteetta?
Mihirat: Tekuwaandoo waggaa baayyeen dalage. Bara 1997 A L I yeroon kutaa 4 baradhun eegale. Amma [International ykn Global Master Licence) hayyama kan sadarkaa idil-addunyaan qaba. Leenjisuummaa (couching) leenji'uudhaaf ji'a tokkoof Kooriyaan ture.
Kanaaf, yeroo ammaa Daanii sadarkaa 4ffaan (4th Dan) qaba.
BBC: Hayyamni [International ykn Global Master Licence) ykn Daanii sadarkaa 4ffaan (4th Dan) jechuun maal jechuudha?
Mihirat: Namni tokko Daanii tokko (First Dan) qaba jechuun digirii tokko qaba jechuudha. Kiyya ammoo Daanii 4ffaadha (4th Dan) [kolfaa....]. Akka biyyaatti nama muraasadha kan qabu, keessumaa akka shamarraniitti. Hayyama kan 'Global Master License' jedhamu ammoo kan qabnu shamarran lama qofadha biyya Itoophiyaa keessatti. Hayyamni kun sadarkaa addunyaatti fudhatama qaba.
BBC: Kooriyaa deemeera naan jette. Mee biyya kam kamitti leenjii fudhatte ykn dorgomtee beekta?
Mihirat: Akka biyyaatti shaampiyoonaa Itoophiyaa yeroo shan taphadheen jira. Oromiyaadhaaf dorgomee warqee shanan qaba. Achiin booda gara Yunvarsiitii Finfinneetti ergan deebiyee, Yunvarsiitichaasfis taphachaan ture. Yunvarsiitii keessatti shaampiyoonaan ture. Akka Oromiyaattis, akka Federaalaattis taphattuu urjiin ture.
Gara internaationaalaatti yeroo deebiyu, yeroo koo gara leenjisuu (couching) tan deebise. Garee biyyaalessaa keessatti waggaa lamaaf leenjisuun hirmaadheen jira.
Kooriyaan alatti ammoo Taayilaand irratti, riiferii (murteessituu taphaa) ta'uudhaaf leenjii fudhadheen ture. Yeroo ammaa kanan irratti fuulleffadhee jiru leenjisuurrattidha.
BBC: Mee sadarkaa kanarra ga'uudhaaf waan keessa dabarte nutti himi mee. Rakkoon si mudate wayi jiraa?
Mihirat: Yeroo baayyee ummanni keenya shamarran yoo gadi baatee ispoortii hojjette hin jaallatan. Kanaan alattis abbaan koo barumsarratti akkan cimu waan barbaaduuf dirqamaan hayyama haadhakootiifan deema malee baayyee rakkisaa ture akka maatiitti.
Boodarratti ergan dorgommiirratti hirmaadhee qabxii fiduu jalqabee xiqqoo maatiinkoo na hubachuu jalqaban.
Anis isaan booda ummannis shamarran baayyeen gara mana ispoortiitti erguu eegalan. Haalli Arsii Nagallee ture isaan booda baayyee gaarii ture.
BBC: Yeroo amma garee biyyaalessaa leenjisaa jirta. Gosti ispoortii kun ammoo namoota biratti baayyee kana baratame hin fakkaatu. Qaphxii Itoophiyaan dorgommiiwwan irratti argattus gadi aanaa natti fakkaata. Mee waan jiru nuuf ibsimee.
Mihirat: Akka biyyaatti atileetiksii keessaa qabxii guddaa kan fidu Tekuwaandoodha garuu miidiyaan beeksisuu maluuf nuuf taasisaa hin jiru. Abbaan qabeenyaas kan gargaaru baayyinaan hin jiru. Garuu ijoollee ciccimoo baayyee qabna. Keessumaa Oromiyaarraa ijoollee baayyee ciccimootu ba'aa jiru.
Akka biyyaalessaatti tapha guutuu Afrikaatiif Morookoo turre. Achirratti ijoolleen qabxii fidan ijoollee Oromiyaarraa ba'anidha garuu akka biyyaatti wanti isaaniif godhamaa jiru waan tokkoyyu hin jiru.
Ijoollee baayyeetu jira garuu qabxii yeroo fidnu wanti argama kan nama gammachiisu miti. Qabxii fiduudhaaf yeroo kenninnee baayyee hojjenna garuu namni baayyinaan nama gargaaru hin jiru.
BBC: Mee oolmaan guyyaan kee maal fakkaata? Ganamaa hanga galgalaatti akkamitti dabarsita, maal fakkaataa?
Mihirat: Gareen biyyaalessaa shaakala yoo qabaanne ganama saatii 11:00 irrattin mana kiyyaa ba'a. Taaksii qabadheen bakka leenjii deema. Bakka leenjii hanga saatii sadiitti yoon ture, isaan booda ammoo barumsa waanan qabuuf gara Yunvarsiitiin deema.
Saatii 10:00 irratti yeroon barumsakoorraa deebi'u gara garee biyyaalessaan deema. Leenjii galgalaaf deemeen, hanga saatii 1: 00'tti leenjiirra turree gara manakoottan gala. Taaksiin yoo hin jiraanne egaa lukaan deemuudha [kolfaa..].
Irreecha Birraa kutaa addunyaa gara garaatti
Oolmaa koo baayyee ko'uma qaba. Fiigaadhuma oolla. Yeroo akkanaa irratti kan hin hojjenne taanaan ammoo baayyee ulfaataadha. Dirqama hojjechuun qaba, dirqama ammoo of foyyeessuun qaba. Barumsaanis of foyyeessuun qaba.
Barumsi kamiyyuu osoo itti hin dabalamiin ispoortiin kamiyyu faayidaa hin qabu. Ani har'a kanan as ga'e waanan baradheef.
BBC: Barumsa Saayinsii Ispoortii maaliif filatte?
Mihiret: Dur yeroon dorgommiirra ture wanta baayyee kanan ilaalutu jira. Barsiisaan kiyya nama baayyee baratedha. Nama nuti akka barannuufi guddannu barbaadudha.
Barumsa kiyyarrattis waanan cimtuu tureef ispoortiis barumsas akkan wal ladda qabadhee deemuu barbaada. Inni yeroo baayyee ispoortii barachuuf barbaada ture. Akka biyyaatti namoonni Tekuwaandoo barsiisan gaariin hin turre.
Innis namni ispoortii hojjetu kana barumsaan deggeree deeme wanta guddaa hojjechuu barbaada jedha ture. Anis kana nan amanan ture. Waa'ee saayinsii ispoortiis yeroo baayyee nan dhaga'a. Maatiin kiyya garuu hin barbaadan.
Achumarraan anis waa'ee dippaartimentichaa namarraa gaggaafachuun jalqabe. Yeroon yunvarsiitii guutun, Yunvarsiitii Finfinneen guute. Muummeen baradhus Komputeeshinaal saayinsii guuteen yeroo dhufe Yunvarsiitii Finfinnee na ga'e; kollejiin barbaadus na ga'e.
Saayinsii Ispoortii seenuuf ammoo qormaata ture. Anis qorameen nama dhumaa ta'een darbe. Of afoo ispoortii kana guddisuudhaaf waanan yaadaa tureef, dirqama barachuun qaba jedheen of amansiiseen itti seene.
Isaan boodas barumsa qabxii gaariidhaan xumuren barsiiftuu ta'een itti fufe.
BBC: Maal maal barsiifta?
Mihirat: Ergan muummee sana seenaa amma waggaa sadaffaa keessan jira. kanan eebbifames 2008 A L I ture. Yeroon eebbifamu qabxii olaanaa waanan qabuuf achuma keessatti na hambisan. Yeroo jalqabaatiif shamarra qacaranis muummee barnootaa sana keessatti.
Isaan boodas akka ani waan baayyee baruuf waan baayyeetiin na gargaaran. Keessumaa dura ta'aan muummee keenyaa shamarran bakka guddaa akka ga'an barbaada ture.
Durumaaniyyu 'Graduate assistant] ta'ee waan jalqabeef yeroo duraa barsiisota waliin akka gargaarsa shaakalaa kan akka kubbaa miilaa jiminaastikiifi atileetiksii ta'een seenaa ture.
Amma garuu maastersii koo Manaajimantii Ispoortiin barataan jira. Barana Waaqayyo wajjin nan eebbifama jedheen yaada.
BBC: Jireenya kee baayyee ispoortii keessatti dabarsite. Jireenya ispoortii keessatti waan rakkisaa keessa dabarte ykn mudannoo yaadattu qabdaa?
Mihirat: Yeroon ispoortii keessa ture, Tapha Guutuu Oromiyaa kan bara 2003 irratti, Shaashamanneerratti qopha'ee ture. Achirratti mo'adheen ture, taphattuu urjiis ture. Garuu namoonni baayyeen yeroo na ilaalan xiqqoon itti fakkaadha natti fakkaata, yeroo sana Tapha Guutuu Itoophiyaarratti hirmaachuuf ammoo qophiirran ture.
Garuu akka tasaatti leenjisaan maqaa koo nama biraa galchee ture. yeroo sana abdii kutadheen ture sababiin isaas yeroo sana baayyeen hojjedha ture.
[Kolfaa] amma yeroon isa irra deebiyee yaadu baayyee na gaddisiisa. Ergan keessa darbee garuu wanti jireenya ofii keessatti uumamu waan gaariidhaaf jedhee waanan amaneef itti dhiiseen jira. Garuu baayyee gaddeen ture, leenjisaa koos rakkiseen ture.
Barusa kiyyallee itti fufuun baayyee na rakkisee ture. Dorgommichaaf baayyee qophaa'een ture, taphattuu urjii ta'ees filatameen ture. Kun jiruu Tekuwaandoo koo keessatti waanan dagadhu natti hin fakkaatu.
BBC: Fiigicha Irreechaa Guddicharratti hirmaattee ture. Mee fiigichi akkam ture?
Mihirat: Fiigichi baayyee bareedaa ture. Ani qophiin Oromoo ilaallatu yoo jiraate hin hafu. qophiin akkanaa kun yeroo jiraatu ummanni keenya bakka adda addaatii dhufee irratti hirmaata. Sun ammoo baayyee na boonsa. Baayyee na gammachiisa. Nama baayyeen achitti arga.
Qophii akkasii kanarraa yoomiyyu hin hafu; nuti tokko taanee yeroon achitti argu bayyee na gammachiisa. Hiriyyoota kiyya waliin bakka ummanni Oromoo walitti qabamu hin hafnu, waliin dabarsina.
Fiigicha Guddicha Irreechaa baranaa kanarrattis hiriyyoota kiyya waliin waliif bilbillee irratti argamne. Suura achitti kan na kaases Lataa ture...[kolfaa], isas baayyee galateeffachuun barbaada. T-shartiis dhabeen ture. Kan T-shartii naaf bites Mahaandis Galatoodha, isas galatoomi jechuun barbaada.
IjoolleeNagallee baayyeetu ture. Isaan waliin bakka tokko turre. Ani suura ka'uudhaaf baayyee 'biiziin ture' [kolfaa..]. Hiriyyoota kiyyaanis achumaan galatoomaa jechuun barbaada. Ummata Oromoo kana bakka sana dhufee dorgommii sanarratti hirmaate mara galatoomaa jechuun barbaada. Baga Gammadne!
Kana caalaa Irreecha dhufuuf baayyannee sirriitti fiiguu qabna jedheen amana.
BBC: Suura ati Fiigicha Irreechaa irratti agarsiisa Tekuwaandoo agarsiisaa kaate sun namoota hedduu bira ga'e. Hedduu namoonni waliif qoodaa turan. Mee maaltu sitti dhaga'ame? Akkas ta'a jettee yaaddeettaa?
Mihirat: Akkas ta'a jedhee hin yaadne dhugaa dubbachuudhaaf. Ani yeroo baayyee fiigichi yoo jiraate baayyinaan nan utaala. Qophii ispoortiin gara garaa yoo jiraate nan utaala. Suuras ofumaaf nan ka'a. Fiigicha Ireechaarrattis akkasuman godhe.
Lataa waliin kanaan duras 'challenge' qabna. Gama ispoortiitiin yoo walitti dhufne na hin danda'u. Suura kana hirriyyoonni kiyya kaasuuyyu hin dadhaban. Suura baayyee kanan osoo utaaluu ka'e heddun qaba.
Qophii akkasiirratti utaaluun anaaf waan yeroo hunda hojjedhudha, suurri kun garuu anaaf addadha. Sababiin isaa, fiigicha seena qabeessaafi adda ta'errattidha. Itti aansee ummanni Oromoo baayyee jaallatee jira. Anis irra deddeebiyeen ilaalaan ture. Namni baayyeenis baayyee maxxansaa ture.
Kan dura mxanse 'Gulallee Post' ture, osoon ilaalaa jiruu hiriyyaan koo Dastaa Dhaqqaboo jedhamu UK irraa naaf bilbile. Isatu suura sana Feesbuukii koorraa fudhatee isaanitti kenne. Ilaali suurri kee baayyee qoqqoodamaa jira. Ammaan booda 'famous' ta'aa jirta naan jedhe...[kolfaa].
Isaan booda, baayyee qoodamuu isaas argeera, yaada namoonni kennanis ilaaleen kolfaa, gamadaa ture. Baayyee gammadeen jira. Ummanni kiyya baayyee na beekee jira.
BBC: Gara fuula duraatti maaltu na hafa jettaa?
Mihirat: Amarratti ani karaarran jira jedheen yaada. Wanta baayee akkan hojjechuu qabu nan amana. Yunvarsiitii keessatti tajaajila bilisaan kennaa jira. Maatiin ijoollee qabatanii dhufanii mooraa keessatti leenjisaan jira. Ganna kana keessa ijoollee jaatama ta'an leenjisaan ture.
Ummata keessatti baayyee hojjechuun fedha. Amma garee biyyalessaa irratti hojjechaa jira garuu kanarratti qofa dhaabbachuu hin fedhu. Gara idil-addunyaatti guddisuun fedha.
BBC: Dhumarratti dhaamsa maal qabda?
Mihirat: ummata Oromoo maraan galatoomaan jedha. Warra karaa feesbuukii na argitanii yaada naaf kennitanis galatoomaa, ulfaadhaan jedha. Leenjisaa koo, hiryyoota koos guddaa galatoomaa jechuun barbaada.
Gara fuula duraa ammoo hundumti keenyayyu Irreecha Hora Finfinneerratti, kan Hora Arsadiittis wal haa garru. Irraa hin hafnu. Ani gaafa sana garuu Tekuwaandoo hin hojjedh sababiin isaa wayyaa aadaa koon uffadhee dhufa. Bakka sanatti Oromoon hunduu tokkummaan ba'ee aadaa ofii addunyaaf beeksissu qaba jedheen amana.
Bara dhufuuf ammoo Fiigicha Irreecha Guddichaaf of qopheessaa. 'Challenge' haarawaa hedduu qabannee dhufna jedheen amana.
Viidiyoo Waancaan kubbaa Miilaa Addunyaa kan dubartootaa waan hedduun baayyee dabalaa dhufe